Casho sharaf loo sameeyay Wasiirka Warfaafinta Col. Cabdullahi Ciilmooge
Casho sharaf loo sameeyay Wasiirka Warfaafinta Col. Cabdullahi Ciilmooge	Last Updated on Wednesday, 23 January 2013 00:26	Wednesday, 23 January 2013 00:23	Jaaliyada Soomaalida ee gobolka Minnesota ayaa casho sharaf u sameysay Wasiirka Warfaafinta, Boostada, Isgaarsiinta iyo Gaadiidka Col. Cabdullahi Ciilmooge. Wasiirka wuxuu ka mid ahaa wafdigii uu hogaaminayay madaxweynaha Soomaaliya Dr. Hassan Sheikh Mohamud ee booqashada shaqada ku yimid wadanka Mareykanka.
Wasiirka wuu ka haray wafdiga Madaxweynaha. Dhowr maalmood ayuu ka dambeynayaa wafdiga madaxweynaha. Casho sharafta waxaa ka soo qeyb galay qeybaha kala duwan ee bulshada. Madaxda jaaliyada ayaa ka hadashay goobta.
Gen. Qaadi oo ka hadlay goobta ayaa Col. Cabdullahi ku tilmaamay in uu yahay nin karti badan oo wax badan kusoo kordhin kara dib u dhiska wadanka. Wasiirka oo isna goobta ka hadlay ayaa ka warbixiyay xaalada wadanka. Wuxuu tilmaamay in uu amaanka wax badan iska badalay. Wuxuu dadka kula taliyay in ay wadanka dib ugu soo noqdaan oo qeyb ka noqdaan dib u dhiska wadanka. Aad ayaa loogu riyaaqay war bixinta wasiirka.
Waxaa goobta ka heesay fanaaniinta gobolka Minnesota.